PageRank: နယူတန်၏မြေထုဆွဲအားသီအိုရီကိုအသုံးချခဲ့သည် Martech Zone
စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 29, 2007 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 20, 2015 Douglas Karr
m1 ပထမ ဦး ဆုံးအမှတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်၏ဒြပ်ထုဖြစ်ပါတယ်။
G (Google?) စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
m1 သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏လူကြိုက်များမှုဖြစ်သည်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာ (၂) ခုအကြားစွမ်းအား၏ပမာဏကိုဆုံးဖြတ်သည့်စဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ရှုပ်ထွေးသော algorithm ကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် PageRank နောက်ကျော link များ, အခွင့်အာဏာ, လူကြိုက်များခြင်းနှင့် recency ပင်ပါဝင်သည်, ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကအဆက်မပြတ်ထိန်းချုပ်သည်။
ဂူဂဲလ်သည်အကြီးဆုံးဂြိုလ်များကိုရှာဖွေနေသည့်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့်ဘလော့စကြ ၀ beingာသည်စကြာ ၀ beingာဖြစ်သည်ဟုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
Larry Page (PageRank ရှိ 'Page') နှင့် Sergey Brin တို့သည်နယူတန်၏သီအိုရီအကြားစင်ပြိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ်ကိုမူသူတို့မသိရပါ။ Google stardom ရန်။ ဒီသီအိုရီကိုနားလည်ပြီး ၀ က်ဘ်ကိုအသုံးချခြင်းသည် Search Engine Marketing ကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်အပြိုင်တစ်ခုကိုဆွဲယူလို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အေးဆေးအေးဆေးပဲ။
အကယ်၍ သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုတွင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအဆင့်ကိုရလိုပါကသင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားမှာအခြားသော့ချက်စာမျက်နှာများကိုကိုက်ညီသောသော့ချက်စာလုံးများကိုရှာဖွေပြီးသင်တို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရနိုင်မည်လားဆိုသည်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူတို့ကသင့်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုပေးရင်အသုံးချတဲ့စွမ်းအားကသင့်ကိုသူတို့နဲ့ပိုနီးကပ်စေလိမ့်မယ်။ ထုထည်ကြီးမားသည့်ဘလော့ဂ်များ (er … PageRanks) သည်အခြားသေးငယ်သည့်ဆိုဒ်များကိုပိုမိုနီးကပ်စွာဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
Search Engine Marketers ကဒီသီအိုရီကိုအသိအမှတ်ပြုသည်
Paid link များသည်ယခုအခါအလွန်ရေပန်းစားသည် Google ကတိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာ။ ပေးဆောင်ထားသောလင့်ခ်များသည်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုအတုအယောင်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ဆိုဒ်များကိုဆွဲထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဂူဂဲလ်ကမှတ်ယူသည်။ များစွာသောဘလော့ဂါများငါ့ကိုအပါအဝင်) သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအခွင့်အလမ်းအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်အဖြစ်ရှုမြင်ပါ။
နေ့စဉ်နီးပါးကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာဆွဲဆောင်လိုသောတရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှကမ်းလှမ်းမှုများကိုကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိသည်။ ငါမူကားအတော်လေး finicky ပေါ့။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ ကျော်ကိုပယ်ချလိုက်သည်။ ၎င်းသည်ငြင်းဆန်ရန်အတွက်ငွေအမြောက်အများပုံရသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုပြည့်တန်ဆာလုပ်ခြင်းနှင့်ဂူဂဲလ်သည်ကျွန်ုပ်အားထောင်ထဲချလိုက်သည်။ ဖြည့်စွက်အညွှန်းကိန်း).
ပုံကြီးထဲမှာကျွန်တော်မသေချာဘူး Google အဆိုပါပေးဆောင် link ကို fiasco ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။ အချို့သောသူများသည်မြေထုဆွဲအားနိယာမများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေပြီးဂူဂဲလ်သည်သဘာဝနိယာမတရားများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးစားနေသည်။
သူများမိုက်ခရိုဆော့ဖ် Guys တောက်ပနေတယ်
ဒါကဒီ post ကိုလာအောင်နှိုးဆွပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါဒီ post ကိုသုတေသနလုပ်တဲ့အခါငါရှာတွေ့ခဲ့တယ် Microsoft က ဖြန့်ချိမယ့် သတင်းအချက်အလက်ပြန်လည်ရယူခြင်းအတွက်မြေထုဆွဲအားအခြေခံသည့်ပုံစံ သြဂုတ်လ 2005 စိတ်ဝင်စားစရာအတွက်စက္ကူ။
Tags: မင်္ဂလာပါအရေးကြီးမှုmicrosoftPageRankpagerank algorithm ကိုအဆင့်seo
2008: Micro ၏တစ်နှစ်